Posted on April 3, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
1. Aqua Teen Nzara Simba bhomba rinotyisa
Boston ine mbiri yakakwana zvekuti inogona kuve inotarisirwa pakurwiswa nemagandanga, uye vagari nezviremera vane kodzero yekuchenjerera kana vakaona zvingangoita kutyisidzira. Ehe, Cartoon Network pamwe nekambani yemubereki, Turner Broadcasting, havana kufunga nezveichi pavakatangisa mushandirapamwe wekushambadzira wechiratidzo chehusiku-husiku,Aqua Teen Nzara Simba.
Vakaturika mabhodhi madiki emagetsi emagetsi airatidza mwenje-wevaratidziri vevatambi, uye vakafunga kuti mabhiriji mudunhu rakabatikana rezvokutengeserana muBoston ichave inzvimbo yakanaka yekuti kwavo kushambadzira kwekunyepedzera kuonekwe. Uye vanhu vakavaona; chitima passenger, vachiona bhodhi newaya zvichibuda kunze, vakavatora semabhomba. Akazivisa mapurisa, akaridza chimwe chezvigadzirwa uye akavhara migwagwa mikuru nemabhiriji maviri. Pakangonzwisiswa stunt yezvaive, varume vaviri vakasungwa nekuisa hunyengeri uye nehunhu hwakashata.
2. Casa Sanchez nyora
Mhuri yeSanchez, iyo ine taqueria muCalifornia, yakanyanyisa kurerutsa kukwidza kwemabritos avo - kana hurefu vanhu vanozoenda kunotora chikafu chemahara. Kana varidzi venzvimbo vakaisa chikwangwani muhwindo reCasa Sanchez vachipa masikati emahara upenyu kune chero munhu aizozvinyora logo paari, havana kufunga kuti chero munhu anozvitora zvakanyanya. Asi vanhu vakadaro. Vatengi vashoma vane inki vakashanduka kuita mafeni makumi mana vachitamba maTattoo.
Uyezve varidzi vakaita math. Kana vanhu ivavo vakashandisa zvakazara yavo kuzvipira kwehupenyu hwese, ndichiuya ne $ 8 yemasikati zuva rega rega kwemakore makumi mashanu, zvaizoita mutengo muresitorendi $ 5.8 mamirioni. Mushure mekumhanyisa iwo manhamba anoshamisa, mhuri yeSanchez yakasarudza kutora huwandu hwevanhu vaigona kuwana chibvumirano pa50, uye kubvunzurudza. goneko hupenyu-nguva vatengi kuti vaone kuti vaiita nzara sei. Iyo logo, kana iwe waive uchishamisika, mukomana mudiki ari mune sombrero akatasva nzeve yechibage inoita senge roketi chikepe.
3. Bata Wako Wee kumakwikwi eWii redhiyo
Nhepfenyuro dzinozivikanwa nekuuya nemakwikwi ekupenga kuti vabate vateereri uye vazivikanwe. KDND 107.9 muCalifornia vakafunga kuti vanogona kuwana buzz shoma kumakwikwi uko vanhu vaizoona kuti vanganwe mvura yakawanda sei vasina kuenda kuchimbuzi. Vakaidaidza kuti "Bata Yako Wee yeWii" uye vakaronga kupa uyo anokunda iyo vhidhiyo mutambo system.
Vakawana buzz yakawanda kupfuura zvavaitarisira, zvakadaro, apo mukwikwidzi akafa nekudhakwa kwemvura. Akange ave mumhanyi-mumakwikwi, uye akanyunyuta pamusoro pemusoro wake wairwadza paakasiya. Vashandi gumi pachiteshi cheredhiyo, kusanganisira ivo varatidziro panguva yemakwikwi, vakadzingwa. Murume wemukadzi akahwina $ 16.5 mamirioni kesi kupikisa chiteshi.
4. Snapple popsicle kunyungudika
Wese munhu anoda kunzwa nezvazvo nyika itsva zvinyorwa, mutorwa ari nani. Snapple, iyo jisi nekambani yetii, yaifunga kuti kutyora runyorwa rwekunoshamisa sekufadza sePosicle Huru Pasi Pose kungave kushambadzira kwakakwana. Vakagadzira iyo popsicle, 35,000 mapaundi uye makumi maviri nemashanu pakureba, kunze kwe kiwi-sitirobheri Snapple, ndokuitumira mumafirita rori ku Times Square mu New York kwavakaronga kuimisa.
Kunyangwe paine kugadzirira kwakazara, timu yekutengesa yakasarudza zuva rekutanga rezhizha, apo tembiricha yakarova ine hunyoro madhigirii makumi masere, kuti ibvise iyi stunt. Iyo crane payakatanga kusimudza hofori popsicle, pink mvura yakamhanya kubuda, ichivhara mugwagwa mune inonamira Snapple muto. Vakuru vacho vakamisa kuyedza kumira popsicle yakamira vachitya kuti chimiro chakakanganiswa uye chaizodonha, uye marori emoto akachenesa nyonganiso.
5. Balloon mukomana
Hazviwanzo kuti iwe uwane mhuri inoedza chimwe chinhu chinotyisa kuti izivikanwe, asi muna 2009, maTV muAmerica akagadzirirwa kutarisa mhuri yeHeene ichinetseka nezvemwanakomana wavo aibhururuka nemhepo mukati yakagadzirirwa kumba helium chibharumu. Richard naMayumi Heene vakadaidza zviremera pakaburitswa chibharuma chemhuri uye vakatya mwana wavo wemakore matanhatu aive mukati. Pakupedzisira, mukomana akasvika ndokuti aive akavanda mudenga remba.
Asi muhurukuro ye Larry King Live, Falcon Heene akati vabereki vake vange vamuudza kuti vari kuita izvi pachiratidziro, zvichireva kuti chokwadi chiratidziro vaitarisira kuti kufambiswa kwavo kuchakurudzira. Mhuri haina kupihwa dhizaini yeTV, uye vese vakuru Heenes akagamuchira nguva yejeri yekunyepedzera.
[btn link = "http://www.businessinsurance.org/10-marketing-gimmicks-gone-wrong/" color = "grey" size = "size-m" target = "_ blank"] Verenga Chinyorwa Chekutanga Chaicho [/ btn]
Vatatu Marines Akadzvanywa Panguva yeDodgers Game
Angave Murevi Wenhema: Online Kudanana Tsvuku Mireza
Imwe pfungwa ya “10 Kushambadzira Gimmicks Kwakaenda Zvakashata"
Pingback: George Floyd Riots uye Mukadzi mune Scooter »: Wiricheya Nyanzvi® (Tenga Mawiricheya Pamhepo muIndia)